တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Kazuyuki NAKANE အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Kazuyuki NAKANE အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Kazuyuki NAKANE အား ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္မွျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ခုိင္ခုိင္မာမာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္မွစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုိင္ငံသုိ႔ထြက္ခြာသြားသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီစိစစ္လက္ခံရန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း) မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးထြဋ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သံ႐ုံးမွ သံမွဴးႀကီး Mr. Ichiro MARUYAMA ၊ စစ္သံမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးတုိ႔သည္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအျပန္အလွန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Kazuyuki NAKANE အား ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် တပ်မတော်မှပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုကိစ္စရပ်များနှင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ခိုင်ခိုင်မာမာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည် နယ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုများအပေါ် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံသည့်အခြေအနေများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများအား ဥပဒေနှင့်အညီစိစစ်လက်ခံရန်ကိစ္စရပ်များ၊ ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ သင်တန်းသားများစေလွှတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံမှူးကြီး Mr. Ichiro MARUYAMA ၊ စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက် ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dr. Vivian Balakrishnan အားလက်ခံတွေ့ဆုံ